Andrianamboninolona - Wikipedia
Ny Andrianamboninolona dia anaran’ ny iray amin’ ireo zanaka naterak’ Andriamananitany sy Randranomboahangy. Ny Andrianamboninolona koa dia anarana iantsoana ny satan’ ny iray amin’ ireo antanantohatr’ andriana fito nisy tao Imerina talohan’ ny taona 1896.
1 Ny hevitry ny teny hoe Andrianamboninolona
1.1 Iray amin’ireo zanaka naterak'Andriamananitany sy Randranomboahangy
1.2 Iray amin'ireo antanantohatr'andriana fito tao Imerina
2 Ny firazananan' ny taranak' Andrianamboninolona
3 Ny toerana ahitana ny Andrianamboninolona
4 Ny asany
Ny hevitry ny teny hoe AndrianamboninolonaHanova
Manana heviny roa ny teny hoe Andrianamboninolona:
Iray amin’ireo zanaka naterak'Andriamananitany sy RandranomboahangyHanova
Voalohany: ny teny hoe “Andrianamboninolona” dia anaran’ ny iray amin’ireo zanaka naterak’ Andriamananitany sy Randranomboahangy. Andriamitondra no rahalahin’io Andrianamboninolona io. Andrimananitany moa dia rahalahin’ Andriamanelo mpanjakan’i Alasora. Andriamanalimanjaka sy Rangitamanjakatrimovavy kosa no ray sy renin’ Andriamananitany, izany hoe raibe sy reniben’ Andrianamboninolona. Rangitamanjakatrimovavy moa dia zana-dRafohy nanjaka tao Imerimanjaka. Telo ny vadin’ Andrianamboninolona, dia i Rasoavimbahoaka Rafotsindrindramanjaka anabavin’ Andriamanelo mpanjakan’i Alasora, i Rabefaravolamanjaka zana-dRabiby mpanjakan’ Ambohidrabiby ary ilay vadiny niterahany an-dRambavy. Samy niterahan’ Andrianamboninolona ireo vadiny telo ireo.
Iray amin'ireo antanantohatr'andriana fito tao ImerinaHanova
Ary faharoa : ny teny hoe “Andrianamboninolona" koa dia anarana iantsoana ny satan’ ny iray amin’ ireo antanantohatr’ andriana fito nisy tao Imerina talohan’ ny taona 1896. Ity heviny faharoa ity dia hafohezin’ ny fitenena hoe “zanakambony”. Antanantohatr' andriana eo anelanelan' ny Andriandranando sy ny Andriantompokoindrindra ny Andrianamboninolona. Tato aoriana dia nantsoina ho Andriateloray ny Andriandranando sy ny Andriantompokoindrindra ary ny Andrianamboninolona.
Ny firazananan' ny taranak' AndrianamboninolonaHanova
Ny zanaka amam-paran’ Andrianamboninolona dia tsy andrianamboninolona avokoa ny firazanany.
Ny taranak’ ireo zanakalahin’ Andrianamboninolona tamin-dRafotsindrindramanjaka Rasoavimbahoaka, dia ny terak’ Andriantomponarivo, ny terak’ Andriakafazaka ary ny terak’ Andriatompoinarivo mitoetra ao Ambohitrandriananahary akaikin’i Alasora, Ambohitromby, Kilonjy, Ambonisoa, Fieferana ary ny vohitra miaraka aminy toa an’ Ambohitriniandriana, Ambohipiainana, Andranomanjaka, Viliahazo, sns dia nataon-dRalambo ho andrianamboninolona ny firazanany. Ary izay andrianamboninolona avy eo ka nafindra monina na nifindra monina dia mbola andrianamboninolona no firazanany.
Ny tarana-dRalambo sy Ratsitohininamanjaka, na dia zanaka vavin’ Andrianamboninolona sy Rasoavimbahoaka Rafotsindrindramanjaka aza i Ratsitohininamanjaka, dia tsy mba natao ho andrianamboninolona ny firazanany fa nataon-dRalambo ho “zanakandriana mahazo manjaka” ny firazanany dia Andrianjaka sy ny doriany izay tato aoriana nosokajian’ Andriamasinavalona ho terak’ Ifohiloha mizara ho antanantohatra zanakandriana, zazamarolahy ary andriamasinavalona.
Ny taranak’i Andrianamboninolona sy Rabefaravolamanjaka dia tsy mba natao ho andrianamboninolona ny firazanany fa nataon-dRalambo ho “ zanakandriana mandrakizay mahazo manjaka” afohezina hoe Andriandoriamanjaka. Anefa ireo Andriandoriamanjaka tompon’Ambohibe akaikin'Ambohibeloma ao avaratr'Arivonimamo any Imamo dia mitonona ho andrianamboninolona ihany.
Fa nisy koa teo Alasora (sa Ambohitrandriananahary?) zafin’ Andriamananitany, na taranak’ Andrianamboninolona avy amin’ Andriantomponarivo lahimatoa hoy ny lovantsofina hafa, no tsy nanaiky ny nanaovan-dRalambo azy ho andrianamboninolona ny firazanany fa nanasokajy ny tenany ho “zanakandriana mahazo manjaka” koa ny anaran’ izy ireo aza dia nasiany hoe “manjaka” dia Andrianonimanjakatany, Ramanjaka sy Ramanalinarivo mianadahy izany. Koa nandao an’i Alasora izy ireo tamin’ ny nanjakan-dRalambo ary nianatsimo tany Betsileo koa tonga mpanjaka voalohany tao Andratsay. Ary izy ireo dia tsy mitonon-tena ho andrianamboninolona mihitsy mandraka ankehitriny fa zanakandriana no firazanany hatrizay ka hatramin' ny niakaran' Andrianampoinimerina teo amin' ny fanjakana na dia taranak’ Andriamananitany aza izy ireo.
Fa ny tarana-dRambavy ao Masindray, na dia zanaka naterak’ Andrianamboninolona aza i Rambavy, saingy hafa reny, hoy ny lovantsofina, dia tsy mba natao ho “andrianamboninolona” ny firazanany fa nataon-dRalambo ho “zanadralambo” ny firazanany.
Ny terak’ Andriamitondra rahalahin’ Andrianamboninolona dia nitonona fa “Andrianamboninolona” no firazanany anefa ny lovantsofina hafa dia milaza fa na dia noeken’ ny mpanjaka nifandimby aza ny maha-taranak’ Andriamananitany ny terak’ Andriamitondra dia tsy nomena ny firazanana “andrianamboninolona” izy ireo saingy natao ho manan-tantara, koa izy ireo ihany no mahazo mikasika ny taolambalo anaty trano masina aty Imerina nanomboka tamin’ Andrianampoinimerina.
Misy kosa ny tera-dRalambo izay milaza fa tsy zanadralambo ny firazanany fa “andrianamboninolona" dia ny sasany amin’ ny terak’ i Manandriana izany.
Ny toerana ahitana ny AndrianamboninolonaHanova
Tamin’ ny nanjakan’ Andriamanelo (talohan’ ny taona 1575) dia teo Ambohitrandriananahary akaikin’ i Alasora, teo amin’ Andriamananitany rainy, no nonina Andrianamboninolona.
Rehefa novonoin’ Andriamanelo i Andriamananitany rahalahiny dia nandositra niala teo Ambohitrandriananahary-Alasora i Andrianamboninolona ka nifindra nonina teo Analamanitra nantsoina hoe Ambohitralatenina.
Tato aoriana dia nomen’ Andriamanelo ho zara-tanin’ Andrianamboninolona, ankoatra an’ Ambohitrandriananahary akaikin’ i Alasora, i Ambohitralantenina saingy novainy anarana ho Ambohitrombihavana. Teo Andrianamboninolona sy Rafotsindrindramanjaka no nonina ary maro no teraka teo ireo zanany. Misy fotoana anefa i Andrianamboninolona mitoetra amin-dRabefaravolamanjaka vadiny aman-janany teo Ambohitrandriananahary avaratr’ Ambohidrabiby, koa izy Andrianamboninolona no nanao io anaram-bohitra eo avaratr’ Ambohidrabiby io ho fitadidiana ny maha iray io vohitra io amin’ Ambohitrandriananahary akaikin’ i Alasora izay zara-taniny rahateo.
Rehefa lasa vadin-dRalambo i Ratsitohininamanjaka Ratompokoandriambavy zanak’ Andrianamboninolona tamin-dRafotsindrindramanjaka dia nitarin-dRalambo ny zara-tanin’ Andrianamboninolona rafozan-dahiny ka ankoatr’ Ambohitrandriananahary akaikin’ i Alasora sy Ambohitrombihavana, dia nomen-dRalambo an’ Andrianamboninolona rafozany ny tampon-tanety mitomandavana hatreo Ambohitrombihavana mianavaratra hatrany Kilonjy sy ny manodidina. Araka izany, teo anelanelan' ny zara-tanin' ny Andriandranando sy ny zara-tanin' ny Andriantompokoindrindra no nisy ny zara-tanin' ny Andrianamboninolona.
Teo amin’ ny lapan’ Ambohidrabiby renivohim-panjakany kosa anefa no namponenin-dRalambo i Ratsitohininamanjaka vadiny sy ny zanany (fa rehefa lehibe nahasaraka ireo zana-dRatsitohininamanjaka vao napetrany tamin’ ny vohitra hafa). Teo Ambohidrabiby koa, amin’ ny faritra avaratry ny lapany, no namponenin-dRalambo noho ny antony manokana ireo Andriandoriamanjaka zanak’ Andrianamboninolona tamin-dRabefaravolamanjaka ary ry Andriantomponarivo telo mirahalahy anadahin-dRatsitohininamanjaka izay zanak’ Andrianamboninolona tamin-dRafotsindrindramanjaka. Ireo anadahin-dRatsitohininamanjaka ireo moa dia tsy nahazo zara-tany teo Ambohidrabiby (anefa Ratsitohininamanjaka dia nafenina teo Ambohidrabiby rehefa niamboho).
Nony tato aoriana dia nafindran-dRalambo avy eo Ambohidrabiby honina amin’ ny zara-tanin’ Andrianamboninolona i Andriantomponarivo telo mirahalahy sy ny fianakaviany. Tamin’ izany dia i Andriantomponarivo lahimatoan’ Andrianamboninolona tamin-dRafotsindrindramanjaka, no napetra-dRalambo teo Kilonjy sy Ambonisoa izay faritra avaratra indrindra amin’ ny zara-tanin’ Andrianamboninolona. Ireo rahalahin’ Andriantomponarivo kosa dia niparitaka teo Ambohitriniandriana, Ambohitrombihavana sy Ambohitrandriananahary. Nisy tamin’ny terak’ Andriantomponarivo anefa no tsy nanaiky ho eo Kilonjy fa nonina teo Ambohitrandriananahary akaikin’ i Alasora.
Andriantomponarivo sy ny taranany vitsivitsy anefa tsy nonina ela teo Kilonjy fa nidina tety ambany andrefana teo Ankorombe ka nonina tanteraka teo (anefa izy dia nafenina ao Kilonjy ihany rehefa niamboho). Fa ny zanany roa lahy natao hoe Andrianolonantonandriana sy Andriandranotolo tsy mba nanaraka azy teo Ankorombe fa nijanona nonina teo Kilonjy. Marihina anefa fa tato aoriana, nisy tamin’ ny faritra atsimo-andrefana amin’ ny vohitra Kilonjy no lasan’ ny zanadralambo.
Nisy taranak’ Andriatomponarivo niaraka nonina tamin’ Andriatomponarivo teo Ankorombe anefa no efa nanorim-pasana teo Ankorombe koa nisy tamin’ izy ireo no niala teo Ankorombe ka lasa nifindra monina nianavaratra koa natao ho Ankorokely no anaran’ ny vohitra misy azy any avaratra io ho fahatsiarovany an’ Ankorombe.
Tamin’ Andriambelomasina kosa dia nidina avy eo Kilonjy ireo zanaka amam-paran’ Andriantomponarivo dia ny terak’ Andriantompomanarivo sy ny terak’ Andriandranofolo koa nijanona sy nanorim-ponenana teo Ankorombe izay novaina anarana tamin’ io fidinana io ho Fiaferana. Tamin’ ny nanjakan’ Andriamasinavalona sy Andrianampoinimerina dia nisy tamin’ ireo Andrianamboninolona no nahazo zara-tany teo Antananarivo dia ny faritra avaratr’ Ambohitantely ao antsinanan’ Andohalo, teo Antsakaviro sy Antanimora, ny faritra antsinanan’i Faravohitra hatreo Ampandrana ka hatrany Ampasandratsarahoby, teo Ambohimanga, teo Anosimanjaka, tao atsimon’ Ambohibao Atsimo, teo Amboniloha, Ankadindramamy, Imerimandroso, Ambohinime, Isoavinimerina, ary amin’ny faritra maro hafa.
Ny Andrianamboninolona dia tsy nanana taozavatra tena nampiavaka azy na dia nanavana azy aza ny tenona landy. Ny Andrianamboninolona koa dia nanana sampy natao hoe “Rabehaza”, iray amin’ny sampy 12 masina ka teo Kilonjy no notezaina io sampy io hatramin’ ny nandoroana ny sampy masina.
Ary farany, ny lehibe indrindra dia tsy amin’ ny maha-mpanjaka an-dRalambo rainy akory no nahazoan’ Andrianjaka nanjaka nandimby an-dRalambo fa avy amin-dRatsitohininamanjaka reniny. Arak’izany, raha saika mpampita hasina no anjaran’ ny vehivavy vadin’ ny mpanjaka taty Imerina, i Ratsitohininamanjaka zanaka vavin’ Andrianamboninolona kosa dia niavaka satria dia ny fanjakana no nampitainy tamin’ Andrianjaka raha nanambady an-dRalambo izy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrianamboninolona&oldid=977999"
Dernière modification le 2 Desambra 2019, à 11:43
Voaova farany tamin'ny 2 Desambra 2019 amin'ny 11:43 ity pejy ity.